Codsiyada - Beijing Anbesec Technology Co., Ltd.
1. Kabadhada xarigga, tunnel-ka fiilooyinka, xarkaha xarigga, keydiyaha xargaha iyo aagagga kale ee dabka
Ogaanshaha dabka aagga xarigga, LHD waxaa lagu rakibi karaa qaab-S ama mowjad xiriiriyaha sine (marka fiilada korontada aan loo baahneyn in la beddelo) ama jiifinta hareeraha hareeraha sine (marka fiilada korontada loo baahan yahay in la beddelo ama la ilaaliyo).
Si loo hubiyo xasaasiga iyo wax ku oolnimada ogaanshaha dabka, dhererka toosan ee u dhexeeya LHD iyo dusha sare ee fiilada la ilaaliyay waa inuusan ka badnaan 300 mm, waxaana lagu talinayaa 150 mm ilaa 250 mm.
Si loo xaqiijiyo kalsoonida lagu qabo ogaanshaha dabka, LHD waa in lagu habeeyo bartamaha xarigga xarigga la ilaaliyo ama qeybta markii ballaca keydka ama xariggu uu ka badan yahay 600mm, waana in LHD nooca 2-layn ah lagu rakibaa. .
Dhererka ogaanshaha heerkulka tooska ah ee LHD waxaa lagu go'aamiyaa qaaciddada soo socota:
Dhererka qalabka wax lagu baaro y saxaaradda dhererka factor canugga isku dhufashada
Width of Cire Tray Isku dhufasho
2. Qalabka Awood Qaybinta
Qaadashada kuleylka kuleylka tooska ah ee LHD oo lagu rakibay koontaroolka gawaarida tusaale ahaan. Sababtoo ah siligga aaminka ah ee lagu kalsoonaan karo iyo isku xidhka, qalabka oo dhan waa la ilaaliyaa. Qalabka kale ee korantada, sida qalabka wax lagu beddelo, mindi ku shubashada, baarka iska caabinta ee aaladda qaybinta ugu weyn, waxay qaadan karaan isla qaabkan marka heerkulka deegaanku uusan ka badnaan karin heer kulka shaqada ee la oggol yahay ee qalabka wax lagu ogaado ee LHD.
Ogaanshaha dabka aagga la ilaaliyo, LHD waxaa lagu dhejin karaa qaab-S ama taabasho mowjad baaraha Baadhuhu wuxuu ku xiran yahay qalab gaar ah si looga fogaado waxyeelo farsamo oo uu keeno walaaca. Qaabka rakibaadda ayaa lagu muujiyay jaantuska
3. Suunka Conveyer
Suunka rarka waxaa wada suunka mootada ee dhaqdhaqaaqa duubista suunka si loogu qaado qalabka. Duubista suunka waa inay awoodaa inay si xor ah ugu wareejiso wiishka go'an xaaladaha caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, haddii duubku uu ku guuldareysto inuu si xor ah isku shaandheyn ku sameeyo, khilaaf ayaa ka dhex dhici doona suunka iyo duubista suunka. Haddii aan waqtiga lagu ogaan, heerkulka sare ee ka dhasha isku dhaca waqtiga dheer wuxuu sababi doonaa suunka iyo alaabada la raro inay gubtaan oo shitaan.
Intaa waxaa sii dheer, haddii suunka xambaarayaasha uu gudbinayo dhuxusha iyo qalabka kale, maxaa yeelay boodhka dhuxulku wuxuu leeyahay khatar qarax, sidoo kale waa lagama maarmaan in la doorto heerka u dhigma ee qalabka kuleylka tooska u ogaada ee qarxa-EP-LHD
Suunka Wareejinta: Naqshadeynta 1
Shuruudda ah in ballaca suunka xambaarayaasha uusan ka badneyn 0.4m, fiilada LHD oo leh dherer la mid ah suunka xambaarka ayaa loo isticmaalaa ilaalinta. Xarigga LHD si toos ah ayaa loogu hagaajin doonaa qalabka aan ka badnayn 2.25m oo ka sarreeya bartamaha suunka wax lagu raro. Qalabku wuxuu noqon karaa xariijin ganaax, ama iyadoo la kaashanayo waxyaalaha jira ee goobta yaal. Shaqada xarigga ganaaxa waa inuu bixiyo taageero. Qalabka isha ayaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo siligga ganaaxa 75m kasta.
Si looga hortago in fiilada LHD ay hoos u dhacdo, qalab xiraha waa in loo adeegsadaa in lagu xiro fiilada LHD iyo siligga ganaaxa 4m ~ 5m kasta. Qalabka siligga ganaaxa waa inuu ahaadaa Φ 2 silig bir birta ah, dhererkiisuna waa inuusan ka badnayn 150m (silig bir ah oo galvanized ah ayaa loo isticmaali karaa si loogu beddelo markii xaaladuhu aysan jirin). Habka rakibida ayaa lagu muujiyay jaantuska.
Suunka Gawaarida: Naqshadeynta 2
Marka balaca suunka xambaarayaasha uu ka bato 0.4 m, rakib fiilada LHD labada dhinacba una dhow suunka gawaarida. Xarigga LHD wuxuu ku xirnaan karaa kuleylka kubbadda isagoo dhex maraya saxanka kuleylka sameynaya si loo ogaado kuleylka sababo la xiriira isqabqabsiga iyo isku soo ururinta dhuxusha la shiiday. Mabda'a guud iyo rakibidda mabda'a waxay ku saleysan tahay xaaladaha goobta iyada oo aan saameyn ku yeelan hawlgalka iyo dayactirka caadiga ah. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, haddii qodobka halista dabka uu weyn yahay, qalabka kuleylka baaraya ee LHD waxaa lagu dhejin karaa labada dhinacba iyo ka sarreysa suunka xamuulka. Habka rakibida ayaa lagu muujiyay jaantuska
Codsiga caadiga ah ee jidadka waaweyn iyo jidadka tareenka ayaa ah in si toos ah loogu hagaajiyo fiilada LHD xarigga dusha sare ee tuneelka, habka loo dhigaayana wuxuu la mid yahay kan geedka iyo bakhaarka ku jira; fiilada LHD waxaa sidoo kale lagu dhejin karaa qolka saxaabada iyo qolka qalabka ee tunnelka, habka jiifku wuxuu tilmaamayaa qeyb ka mid ah xarigga LHD ee lagu dhejinayo saxaaradda.
5. Tareenka Tareenka
Hawlgalka aaminka ah ee tareenka tareenka ee magaalooyinka ayaa ku lug leh qalab badan, gaar ahaan cilad farsamo iyo koronto iyo wareegga gaaban ee korantada ayaa ah qodob muhiim ah oo sababa dabka, gaar ahaan dabka fiilada waa sababta ugu weyn. Si loo helo dabka goor hore marxaladda hore ee dabka oo loo ogaado meesha uu dabka ka kacay, waxaa lagama maarmaan ah in si macquul ah loo diyaariyo qalabka dabka lagu baaro oo loo qaybiyo qaybta dabka. Qalabka kuleylka tooska ah ee loo yaqaan 'LHD' wuxuu ku habboon yahay in lagu ogaado dabka kaybalka tareenka. Qeybta dabka, fadlan tixraac tilmaamaha ku habboon.
LHD qalabka kuleylka toosan ayaa lagu hagaajiyaa dusha sare ama dhinaca wadada waxaana la dhigaa wadada. Marka uu jiro nooca fiilada korontada ee wadada, si loo ilaaliyo fiilada korantada, qalabka kuleylka tooska ah ee LHD waxaa lagu rakibi karaa xiriiriyaha mowjadaha, oo la mid ah kan lagu dabaqay saxaarada xarigga.
LHD wuxuu kuxiran yahay isku haynta hakin ee horey loogu sii rakibay iyadoo la raacayo xariijinta laydhka ee LHD, iyo masaafada udhaxeysa hakin kasta oo xirid badanaa waa 1 m-1.5 M.
6. Beeraha Haamaha ee Saliida, Gaaska, iyo Shidaalka
Batroolka kiimikada, taangiyada saliida iyo gaaska inta badan waa taangiga saqafka sare iyo haanta saqafka sabaynaysa. LHD waxaa lagu rakibi karaa ka-hakin ama xiriir toos ah marka lagu dabaqo taangiga go'an.
Taangiyadu guud ahaan waa taangiyo waaweyn oo qaab dhismeed adag leh. Tirooyinku waxay inta badan soo bandhigaan rakibidda LHD ee taangiyada saqafka sabeynaya. Inta jeer ee dabka giraanta wax lagu xiro ee haanta keydka saqafka sare ayaa sabeysa.
Haddii shaabaddu aysan dhaganayn, fiirsashada saliidda iyo gaaska ayaa ku jiri doonta dhinaca sare. Marka heerkulka ku xeeran uu aad u sarreeyo, waxay u badan tahay inuu sababo dab ama xitaa qarax. Sidaa darteed, hareeraha giraanta wax lagu xiro ee taangiga saqafka sare ayaa sababa qaybta ugu muhiimsan ee kormeerka dabka. Xarkaha LHD waxaa lagu rakibay hareeraha giraanta shaabadda saqafka sare oo lagu hagaajiyo qalabka gaarka ah.
7. Codsiga meelaha kale
LHD qalabka kuleylka tooska ah waxaa lagu dhejin karaa bakhaarka warshadaha, aqoon isweydaarsiga iyo meelaha kale. Marka loo eego astaamaha sheyga la ilaaliyay, LHD ayaa lagu dhejin karaa saqafka ama derbiga dhismaha.
Maaddaama bakhaarka iyo aqoon isweydaarsigu leeyihiin saqaf fidsan ama saqaf fidsan, habka rakibaadda qalabka kuleylka tooska ah ee LHD ee labadan dhisme ee qaabdhismeedku waa ka duwan yahay, kaas oo si gooni ah loogu sharxay hoosta.
(1) Ku rakibida qalabka wax lagu baaro ee LHD qalabka dhismaha saqafka hoose
Nooca qalabka toosan waxaa badanaa lagu hagaajiyaa saqafka oo leh silig LHD ah masaafo dhan 0.2m. Qalabka wax lagu ogaado ee heerkulka tooska ah ee LHD waa in lagu dhigaa qaab ganaax is barbar socda ah, iyo kala dheereynta fiilada ee fiilada LHD ayaa horay loogu sharaxay. Masaafada udhaxeysa fiilada iyo dhulka waa inay ahaataa 3M, oo aan ka badneyn 9m. Marka masaafada udhaxeysa xariga iyo dhulka ay ka badato 3m, masaafada u dhaxeysa xariga iyo dhulka waa in la dhimo hadba sida ay xaaladdu tahay. Haddii xaaladaha rakibidu oggolaadaan, waxaa la soo jeedinayaa in qalabka kuleylka baaraya ee LHD waa in lagu rakibaa meel u dhow aagga ololi kara, taas oo leh faa'iido ah in qalabka wax lagu baaro uu jawaab deg deg ah ka bixin karo dabka.
Markii lagu dabaqo keydka bakhaarka, fiilada heerkulka dareemeysa ayaa lagu dhejin karaa saqafka hoostiisa waxaana lagu habeyn karaa khadka dhexe ee dariiqa shelf, ama waxaa lagu dhejin karaa tuubada nidaamka rusheeyaha. Isla mar ahaantaana, fiilada LHD waxaa lagu hagaajin karaa booska hawo-mareenka toosan. Marka ay yaalaan alaabo khatar ah khaanadda, waa in xarigga LHD lagu dhejiyaa shelf kasta, laakiin howlaha caadiga ah ee shelf waa inaysan saameyn, si looga fogaado in waxyeello loo geysto xarigga LHD iyadoo la keydinaayo lana keydiyo alaabada. Si loo ogaado dabka heerkiisu hooseeyo si ka sii fiican, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro lakab ah fiilo heerkul xasaasi ah jihada dhererka shelf oo leh dherer ka badan 4.5m. Haddii uu jiro nidaam rusheeyaha, waxaa lagu mideyn karaa lakabka riyaaqa.
(2) Ku rakibidda qalabka wax lagu baaro ee LHD qalabka dhismaha saqafka kore
Markaad jiifayso bey'addaas oo kale, masaafada u gogosha xarigga fiilada heerkulka waxay tixraaci kartaa masaafada u dhiganta masaafada heerkulka ee qolka saqafka sare.
Eeg jaantuska qaabeynta.
(3) Ku rakibida Transformer saliid-quusin ah
Qalabka kuleylka tooska ah ee LHD wuxuu badiyaa ilaaliyaa jirka transformer-ka iyo ilaaliyaha.
Xarkaha kuleylka tooska ah ee LHD waxaa lagu dhejin karaa xarig silig bir ah oo dhexroorkiisu yahay 6 mm ku wareegsan jirka qalabka wax lagu beddelayo. Tirada gariiradda fiiqan waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo la eegayo dhererka qalabka wax lagu beddelayo, iyo wareejinta ku teedsan ilaaliyaha waa inaysan ka yareyn 2 xarigood; dhererka dusha sare ee gariiradda sare wuxuu kudhowaad yahay 600 mm hoosta daboolka kore ee haanta saliida, iyo fiilada heerkulka dareemaya waxay kudhowaad tahay 100 mm-150 mm qolofka, Qaybta terminalku wuxuu kuyaalayaa qarka ama firewall, iyo Qaybta kontoroolka ee LHD waxay ku yaalliin meesha derbiga ka baxsan meel ka baxsan qalabka wax lagu beddelo, dhererkiisuna yahay 1400mm dhulka.